Kungase kuvalwe enye inkampani enkulu eHammarsdale | Eyethu News
Bolt enlisted to improve “explosiveness” of Aussie running between the wickets - 60 mins ago
Kungase kuvalwe enye inkampani enkulu eHammarsdale
“Bakhala ngokuthi ihlulekile ukwenza inzuzo eminyakeni emibili eyedlule.”
BASENGCUPHENI abasebenzi baseGlodina Textile Industry eHammarsdale emuva kokuputshuka kwezindaba ezithi lenkampani ingase ivalwe.
BALINGANISELWA kwabangama 600 abasebenzi abangase balahlekelwe imisebenzi enkampanini enkulu eyenza umkhiqizo wamathawula eHammarsdale eNtshonalanga yeTheku.
IGlodina Textile Industry ingase ivalwe ekupheleni kwenyanga kaJuni emuva kokuhluleka ukwenza inzuzo eminyakeni emibili eyedlule.
Oyisikhulu esiphezulu kulenkampani uMnuz Graham Oberholzer exoxa neKZN Eyethu ukuqinisekisile lokhu ngelithi konke kuncika ekuhlulekeni ukuthola ozokwazi ukuthenga leli bhizinisi njengoba lisendalini njengamanje.
“Sibhekene nenkinga yokungakwazi ukwenza inzuzo kulelibhizinisi nosekuphoqeleke ukuba labo abanezabelo kulenkampani bahoxe ukuba yingxenye yenkampani lokhu osekwenze sathwala kanzima kakhulu.” Kuchaza uMnuz Oberholzer.
UKAP iwona osekubikwe ukuthi uyaxebuka kulenkampani ebalwa njengezindala kakhulu kulendawo.
Lokhu sekushiye umphakathi wakulendawo uthi lokhu kuzoba ingozi engeqiwantwala njengoba kusanda kudilizwa kwenye yezinkampani eyakhele lendawo uRainbow Chicken.
IKhansela lakulendawo uMnuz Malombo Nxumalo etshela leliphephandaba uthi lokhu kubona kuzobe kuwukugqemeka engeqiwa ntwala njengoba besapholisa amanxeba okudilizwa kwabantu enkampanini enkulu yomkhiqizo wenkukhu uRainbow Chicken.
“Sibhekene nenkulu inkinga impela njengoba lokhu kuzophinda kushiye eminye imindeni ingadlile nomphakathi ongasasebenzi uma kugcina zingekho izinyathelo ezinqala zokusiza lenkampani,” kusho uMnuz Nxumalo
Kulindeleke ukuba lenkampani ihlangane noNgqongqoshe wezokuthuthukiswa komnotho KwaZulu-Natal uMnuz Sihle Zikalala lingakapheli lelisonto.
BUKA: Imisebenzi Yezulu Elibi eThekwini